मनोरञ्जन Archives - Postmandu
2021-02-05 2021-02-05 PostmanduLeaveaComment on Reality tv मा “चम्सुरीसगँ चिया गफ”, निर्देशनमा समिर जोशी
काठमाडौं । Dish Home को Reality tv मा “चम्सुरीसगँ चिया गफ” प्रशारण हुने भएको छ । हाल प्रशारणमा रहेको पारवारिक हास्य टेलिसिनेमा “खै! कुरा बुझेको ?” का लेखक/निर्देशक समिर जोशीको निर्देशन तथा विणभ क्रियसनको प्रस्तुतिमा “चम्सुरीसगँ चिया गफ” Reality tv मा प्रशारण हुने भएको हाे । विगत १५ बर्ष देखि “चम्सुरी”को उपनामले प्रख्यात हास्य कलाकार […]
2021-01-25 PostmanduLeaveaComment on राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको साधारणसभा सम्पन्न
काठमाडौं । राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल को २०औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको आफ्नै केन्द्रीय कार्यालय भवन टोखामा साधारण सभा सम्पन्न भएको हो । समारोहमा संगीतकर्मी कृष्ण गन्धर्वलाई १५ हजार रुपैयाँसहित ‘लोक बहादुर स्मृति पुरस्कार’, ११ हजार रुपैयाँ नगद सहित लोक पत्रकारिता पुरस्कारबाट सञ्चारकर्मी […]
सुशिल-बिनिताको भन्दैछ हावा (भिडियो)
2021-01-22 2021-01-22 PostmanduLeaveaComment on सुशिल-बिनिताको भन्दैछ हावा (भिडियो)
काठमाडौं । गायक सुशिल नेपालको नयाँ गीत सार्वनिक भएको छ । सुशिलको ‘भन्दैछ हावा’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको हो । डा. बिनिता खरेल नेपालको शब्द रहेको गीतमा कम्पोज समेत गायक सुशिलले नै गरेका हुन् । साइन वेय स्टुडियोजमा रेकर्ड गरिएको गीतको एरेन्ज याकुव राईले गरेका हुन् भने मिक्सड सञ्जय खड्गीले गरेका हुन् । टुडी एनिमेसन […]
जाडो मौसममा निरुतालाई गर्मी चढेपछि (फोटो फिचर)
2021-01-20 2021-01-20 PostmanduLeaveaComment on जाडो मौसममा निरुतालाई गर्मी चढेपछि (फोटो फिचर)
काठमाडौं । अभिनेत्री तथा गायिका निरुता क्षेत्रीले हट फोटोसुट गरेकी छन् । जाडोको मौसममा निरुताले निर्वस्त्र भएर फोटोसुट गरेकी हुन् । काठमाडौंमा सौन्दर्य व्यवसाय समेत गर्दै आएकी निरुता कलाकारिता र आफ्नो पेशालाई सँगसँगै अघि बढाइरहेकी छिन् । उनी गायनको साथै मोडलिङमा समेत सक्रिय छिन् । उनका हट एण्ड बोल्ड तस्बिर तथा भिडियोहरु सामाजिक सञ्जालमा निकै […]
दिप किरातीको जुन (भिडियो)
2020-10-04 PostmanduLeaveaComment on दिप किरातीको जुन (भिडियो)
काठमाडौं । गायक तथा संगीतकार दिप किरातीको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । दिपको ‘जुन’ बोलमा रहेको गीत सार्वजनिक भएको हो । गीतमा शब्द, संगीत तथा आवाज दिपको नै छ । दिप कोरिया हुँदा यो गीत लेखेका हुन् । सञ्जय श्रेष्ठले निर्देशन गरेको गीतको भिडियोमा सञ्जय स्वयं र रेश्मा श्रेष्ठको अभिनय रहेको छ । सुक्रम […]
मनोरञ्जनात्मक च्यानल कमेडी प्लस सुरु
2020-09-26 2020-09-26 PostmanduLeaveaComment on मनोरञ्जनात्मक च्यानल कमेडी प्लस सुरु
काठमाडौं । डिस मिडिया नेटवर्कद्धारा संचालित डिसहोमका डिजिटल सेवा अन्तर्गत अब नयाँ मनोरञ्जनात्मक च्यानल कमेडी प्लस शुरु गरेको छ । यस च्यानल मार्फत पवनकली अनलाइन, अड्डा (डीट्ठा बा द्धारा अभिनित), रुन्चे हाँसो (रमा थपलिया), दिनेश डिसीद्धारा अभिनित धारावाहिक टेलिचलचित्र ट्वाक्क-टुक्क रिटर्न र युवा कमेडियन गणेश राई र विश्वजीत देउजाको संयुक्त प्रस्तुती गोठालो बा हास्यमूलक अन्तर्वार्ता […]